Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Silig News » Martha Stewart waxay soo bandhigtay Khadka Cusub ee Mawduucyada Fayoqabka ee CBD
Maanta, Martha Stewart CBD waxay daaha ka qaaday Mawduucyada Fayoqabka ee Martha Stewart CBD, taasoo calaamad u ah balaadhinta qaybta ugu horreysa ee astaanta ee faylalka CBD ee sii kordhaya. Martha Stewart CBD waxay siisaa macaamiisha hab sahlan oo ay ku maareeyaan baahidooda maalinta oo dhan iyada oo la adeegsanayo alaabada CBD ku habboon oo la aamini karo - oo ay ku jiraan xabagta, saliidaha, jilicsanaanta iyo Mawduucyada Caafimaadka CBD ee cusub. Mawduucyada Fayoqabka ee Martha Stewart CBD waxay bixiyaan xalal fudud oo ay fududahay in la isticmaalo, fududahay in la jeclaado, oo qayb ka ah faylalka fayoobi ee Martha.
Waxaa loo sameeyay si loo hagaajiyo fayoobaanta maalinlaha ah siyaabo gaar ah, khadka mawduucyada ayaa ka kooban Super Strength CBD Cream loogu talagalay soo kabashada murqaha, Sayniska Hurdada CBD Cream loogu talagalay hurdo wanaagsan iyo Daily De-Stress CBD Cream loogu talagalay maareynta cadaadiska. Alaab kasta waxaa loo qaabeeyey iyada oo leh heerarka hogaaminaya suuqa ee CBD, wadashaqayn awood leh iyo farsamooyin caraf udgoon oo la xaqiijiyay oo loo qaabeeyey baahi kasta, dhammaan si taxadar leh ayaa loo miisaamay natiijooyin wanaagsan.
"Waxaan aaminsanahay in si wanaagsan loogu noolaado la fududayn karo iyadoo diiradda la saarayo xalal wax ku ool ah oo wax ku ool ah, taas oo ah sababta aan u abuuray khadkan mawduucyada fayoqabka CBD ee kooxda Kobaca Canopy," ayay tiri Martha Stewart. "Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan gacan ka geysto horumarinta nolol maalmeedka macaamiisheena iyada oo loo marayo qaabab la xaqiijiyay oo ka dhigaya fayoobaanta mid la heli karo oo habboon, oo leh wax ka qabashada raaxo la'aanta muruqa, hurdo la'aanta, iyo walbahaarka."
Qaababka wax ku oolka ah waxaa abuuray Martha iyada oo la kaashanaysa Marquee Brands iyo Canopy Growth Corporation, oo ah shirkad caalami ah oo hogaaminaysa xashiishadda cannabis iyo shirkad wax soo saar oo ku salaysan cannabinoid. Ka faa'iidaysiga kobaca Canopy ee aragtida macaamiisha ee aan la barbar dhigi karin iyo hal-abuurnimada sii socota ee goobta, khadka cusubi wuxuu isticmaalaa caraf udgoon-tignoolajiyada la xaqiijiyay si uu u dhaqaajiyo meelaha muhiimka ah ee maskaxda si loo kiciyo isbeddelka niyadda ee agagaarka aagagga nasashada, hoos u dhaca welwelka, dareenka iyo xusuusta.
"Martha Stewart CBD waxay siisaa macaamiisha xalal fudud si loo hagaajiyo fayoobaanta maalinlaha ah, waxaanan ku faraxsanahay inaan ku siino qayb cusub furitaanka Mawduucyada Fayoqabka ee CBD," ayay tiri Dr. Anna Persaud, Madaxweyne kuxigeenka Maqaarka & Mawduucyada Kobaca Canopy. "La caddeeyey in lala shaqeeyo oo la tijaabiyey macaamiisha, tayada sare leh, xalalka mawduucyada waxtarka leh ayaa si cilmiyeysan loo qaabeeyey oo si adag loo tijaabiyey heerka ugu sarreeya ee heerarka warshadaha, iyo khadka cusubi wuxuu u taagan yahay hal-abuurnimadii ugu dambeysay ee Martha Stewart's portfolio sii kordhaya ee bixinta CBD ee la heli karo."
Mawduucyada Fayoqabka ee Martha Stewart CBD waxaa lagu qaabeeyey CBD-spectrum-ballaaran oo Maraykan-ku-soo-bax ah, oo leh xariiqa muujinaya heerarka suuqa ugu horreeya ee CBD oo leh qiimaha ugu hooseeya halkii mg ee CBD iyo tartamayaasha. Bilawga, SKU kasta waxa uu diyaar u ahaan doonaa iibsashada 20ml, 50ml iyo 150ml.
Kobcinta Awoodda Science